xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဒီအစိုးရကိုလက်မခံလို့ ဘယ်အစိုးရကိုလက်ခံမလဲ ? ( ၂ )
ဒီအစိုးရကိုလက်မခံလို့ ဘယ်အစိုးရကိုလက်ခံမလဲ ? ( ၂ )
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး
မြန်မာနိုင်ငံကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို မြန်မာနိုင် ငံပါဝင်တဲ့ ဒေသတွင်းအဖွဲ့ အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အာဆီယံ အသင်းကြီးအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာ ထောက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
အာဆီယံ အသင်းဝင်မဟုတ်သော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် တရုတ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံများကလည်း ဒီမိုကရေစီ၏ လမ်းစအဖြစ် ထောက်ခံကြိုဆိုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း သတင်းများထုတ်ပြန် ၍၄င်း ၊ ထိုနိုင်ငံများရှိ အစိုးရအာဘော်သတင်းစာများမှ ၄င်း တရားဝင် ကြေငြာခဲ့ကြလေသည် ။
သြစတေးလျ လိုနိုင်ငံမျိုးကပင် မြန်မာနိုင်ငံ ကို ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရှု မြင်နေသူတွေအတွက်တော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ထွက်ပေါက်တခုပါပဲ ပြည်သူတွေ မဲပေးမှုဟာ အဓိကကျတဲ့ ကိစ္စပါပဲ ဒါကြိုဆိုရမယ့်ကိစ္စ ပါလို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုတာ ဘာကိုပြောတာပါလဲ ၊ မြန်မာကို နိုင်ငံရေးအရ အဆင်မပြေလို့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူ နိုင်ငံတွေက မထောက်ခံလို့ နိုင်ငံ တကာအသိအမှတ် မပြုဘူးလို့ ပြောချင်တာလား ၊ နိုင်ငံတစ်ခုက မထောက်ခံရင် ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ဘယ်လောက် ထောက်ခံထောက်ခံ နိုင်ငံတကာအသိ အမှတ်မပြုဘူးလို့ ပြောလို့ရပါသလား ဒါဆို အပြန် အလှန်သဘောနဲ့ အမေရိကန်မှာ ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို မြန်မာက မထောက်ခံဘူးလို့ ပြောလိုက်ရင် အဲဒီ အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာကျင်းပနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကရောနေရင်းထိုင်ရင်း နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်မပြုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်သွားမလား ကုလသမဂ္ဂ ကတော့ နိုင်ငံတိုင်းဟာ တန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ ဆိုထားတယ် ။ ဒီလိုဘယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ....။ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်ကိစ္စမှာများ နိုင်ငံအားလုံး စိတ်တူ ကိုယ်တူ ရှိခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းမှာသင်ဘူးပါသလဲ....။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေ ၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ အကုန်လုံးအပြင် အခြားသောနိုင်ငံတွေကပါ ထောက်ခံနေတာ ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ် ။
အထက်ပါအချက် ၂ချက်ရဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ အများပါဝင်ခွင့်ရပြီး နိုင်ငံတ ကာအသိအမှတ်ပြုရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်တစ်မျိုးစွဲချက် ကတော့ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ ၊ ဒီနေရာမှာ အတိုက်အခံတို့ အဓီက ထောက်ပြတာက နိုင်ငံတကာ သတင်း ထောက်တွေ ၀င်ပြီး သတင်းယူခွင့်မရဘူး....ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲ။
ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာန အသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ် သတင်းထောက်တွေ ရှိပါတယ် ၊ဒီလူတွေ သတင်းယူခွင့်ရပါတယ် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မီဒီယာ အကုန်လုံးက သတင်းထောက်တွေ သတင်းယူခွင့်ရကြပါတယ် ။ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်က ဘယ်မဲရုံကို သတင်းယူချင်ပါတယ်ဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားလိုက်ရင် ကိုယ်ရေးဖောင်လေးဖြည့်ပြီးတာနဲ့ သတ်မှတ်စည်းကမ်း အတိုင်း သတင်းယူခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ် ယူလဲယူခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ သံတမန်တွေ ကို မြန်မာနိုင်ငံတစ် ၀ှမ်း ကလုံခြုံရေးအရ ခွင့်ပြုတဲ့ မည်သည့်အရပ်ဒေသတွေကို မဆို နိုင်ငံတော်က ပို့ဆောင်ကြည့်ရှု နိုင်အောင် စီစဉ် ပေးခဲ့ပါတယ် ။ သံတမန်များလဲ အဖွဲ့တွေခွဲပြီး လေ့လာ ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ် ။
ပြီးရင် သက်ဆိုင်ရာမဲရုံအသီးသီးမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ပါတီအသီးသီးရဲ့ မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကလဲ အချိန် ပြည့်ဆိုသလို စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘာတွေများ ထပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာရဦးမှာပါလဲ။
ဒီနေရာမှ ထူးဆန်းတာကတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန် သံရုံးတွေက တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ မဲရုံတွေကို လိုက်ပြီးကြည့်ရှုဘို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ခေါ်တယ် ၊ မလိုက်ပါဘူး ပြီးမှ မတရားဘူးဆိုပြီးအရင်ဆုံးအော်တာပါ ..ဒီလိုလုပ်နေတာတွေဟာ သံတမန် ကောင်းတွေရဲ့ အပြုအမူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် လက်ရှိအစိုးရက ဘာမှ မပြောခဲ့ပါဘူး..လိုက်ကြည့်ပါဆိုတော့မကြည့်ဘူး ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် အရင်ဆုံးအော်တယ် ဒီလိုလုပ်နေတာကို နိုင်ငံချစ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို တခြားနိုင်ငံသားတွေက သက်သက် စော်ကားနေတယ်လို့များ တခါမှ မမြင်ကြဘူးလားဗျာ ။ သွေးတွေက စကားမပြောကြသေးဘူးလားဗျာ.....
ဒီကိစ္စကတော့ အတိုက်အခံတွေ ပြောစရာမရှိလို့ပြောနေတာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့တွေလဲ အထောက်ထား ပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ ကန့်ကွက်နိုင်တာမျိုး မရှိပါဘူး ။မဲရုံတွေမှာ မဲရုံမှုးတွေရော တာဝန်ကျတွေရော..ဘာမှ မတရားလုပ်လို့ရမယ့် အခြေအနေ မျိုးမရှိပါဘူး ။
မဲရုံ တာဝန်ကျတွေထဲမှာ ဒေးဗစ်ကော်ပါဖီးလို မျက်လှည့်ဆရာတွေလဲမပါကြပါဘူး ၊ တန်ခိုးရှင်တွေလဲ မပါကြပါဘူး ၊ ပျောက်စေ ပေါ်စေ ဆရာတွေလဲ မပါဝင်ကြပါဘူး ရိုးရိုးသာမန်လူတွေ မျှသာဖြစ်ကြပါတယ်။
အတိုက်အခံတွေပြောနေပုံက မဲရုံမှုးက မနက်မဲရုံဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေ ၊ ပါတီတွေက မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တွေသတင်းထောက် တွေရှေ့မှာ "ဟောဒီမှာ မဲပုံးတွေပါ ခင်ဗျာ ..ဘာမှမရှိဘူးနော် သေချာကြည့်ကြပါ သေချာ ကြည့် ကြပါ ဘာမှမရှိဘူးနော်..ဟိုဘက်ဒီဘက်လဲ ဒီပုံးက မြင်နေရတယ်နော် ..ရှင်းပါတယ်နော် ဘာတွေ့လဲ မတွေ့ ဘူးဆိုရင် ဒီအဖုံးလေးနဲ့ပိတ်လိုက်မယ် ဒီအဖုံးကလဲ အကြည်ပဲဆိုတော့ မြင်နေရတယ်နော် ကဲ ဒါဆိုရင် ပိတ်လိုက်ပြီ..ပြီးရင်လွယ်လွယ် ကူကူ ဖွင့်လို့မရအောင် တိတ်လေးနဲ့ ဘေးမှာထိန်းလိုက်မယ် ရှင်းပါတယ်နော်..ပြီးတော့ဟောဒီ ပရိတ်သတ်ရှေ့က စားပွဲခုံမှာ တင်ထားလိုက်ပါပြီ..ကဲမဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေထည့်လို့ရပါပြီ.ထည့်ကြပါ ..ထည့်ကြပါ ဟောဟို အခန်းလေးတွေထဲမှာ ၀င်ပြီး မိမိတို့စိတ်ကြိုက် ဆန္ဒပြုပြီး ဟောဟိုက ပုံးထဲ ထည့်ကြပါ...ဘေးကလူတွေလဲကြည့်နေကြပါ..ထည့်ပြီးကြပြီ လား..အားလုံးပြီးကြပြီလား...ကဲ အားလုံးပြီးပြီဆိုရင် ဒီပုံးကိုဖွင့်မယ်...သေချာကြည့်နော် .ဟော...မဲတွေအားလုံး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မဲတွေဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျား... " ဆိုပြီးလုပ်နေသလိုလို ပြောနေတာပါ ဘာမှ ခြေခြေမြစ်မြစ် မရှိပဲ ဘယ်လို လုပ်လိုက်တယ်တော့မသိဘူး တို့လဲကြည့်တော့ကြည့်နေတာပဲ တခုခုတော့ လုပ်တယ်ကွ ဆိုပြီး ပြောနေတာမျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားရှင်းနေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး...။
နောက် ...ပိုပြီးသေချာတာတစ်ခုက ဒီလိုမဲရုံတွေမှာမဲမသမာမှု ရှိတယ်ဆိုရင် ဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုဘို့ အခွင့်အရေး ပေးထားပေမဲ့ တရားစွဲဆိုမှု မရှိသလောက် ဖြစ်တာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်အပေါ်မှာ အတိုက်အခံတို့ ဘာမှ ငြင်းချက်ထုတ်ရန် မရှိဘူးလို့ ယူဆရ မှာပါဘဲ....။
ဒီပြသနာကတော့ လူပြောသူပြောအများဆုံး ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်...ကြိုတင်မဲဆိုတာကတော့ အများ သိရှိကြတဲ့ အတိုင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပကိုရောက်နေကြတဲ့ တပ်မတော်သားအပါဝင်နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းတွေ ကျောင်းသားတွေ အစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်နေကြတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် တွေအပါအ၀င် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး မဲပေးလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့အစီအမံ တွေဖြစ်လို့ ကြိုတင်မဲ ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ ဟာ လိုအပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် ၊ တကမ္ဘာလုံးက ရွေးကောက်ပွဲတွေအကုန်လုံးမှာ ကြိုတင်မဲပေးရတယ်ဆိုတာ ကြည့်ရင် ဒီကိစ္စက မရှိရင် မဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပေါ်မှာတော့ အတိုက်အခံတွေနဲ့ လဲ ကန့်ကွက်ဟန်မတူပါဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးပြီးချင်းမှာ ကြိုတင်မဲကြောင့်ရှုံးတယ် ကြိုတင်မဲကြောင့်ရှုံးတယ်ဆိုပြီး အသံ တွေတော်တော် လေး ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်း ကော်မရှင်က မဲအရေအတွက်တွေနဲ့ ကြေငြာတော့ ၉၅% ကျော်ဟာ ကြိုတင်မဲကြောင့် ရှုံးတာမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေပေးတဲ့ မဲတွေမှာတင် အရေအတွက် ကွာခြားစွာရှုံးနိမ့် နေခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ ။ဒါဆိုရင် ကြိုတင်မဲဆိုတာကြောင့်လဲ မဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့...
အကောင်းဆုံး ဥပမာကတော့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေ ဘက်က ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး နိုင်ငံခြားသတင်း ဌာန တွေနဲ့ အဆက်သွယ်ဆုံး လူသိသူသိအများဆုံး နိုင်ငံရေးအရ သြဇာအရှိဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မြန်မာက ဥက္ကဌ ဦးသုဝေနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက လက်ရှိ အစိုးရ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့ ရဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့ နယ်က ပွဲပါပဲ ဦးသုဝေဟာ သူ့ပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ သူ့ စိတ်ကြိုက်မဲဆန္ဒနယ်မှာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ၀င်ပြိုင်တာပါ ဦးသုဝေဟာ သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံပြင်ပ မှာ တစ်နေကုန်ရှိနေတာပါ ဘယ်မှမသွားပါဘူး အခြားမဲရုံတွေမှာလဲ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တွေ စောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့ သေချာ အကွက်ကျကျ စီမံပြီး စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့ ညနေပိုင်း မဲတွေရေတွက်တော့ရှုံးပါတယ် ကြိုတင်မဲအကုန်သူယူရင်လဲရှုံးပါတယ် ။
ဒီလို အင်အားအရှိဆုံး လူတောင်ရှုံး ရင် ကျန်တဲ့သူတွေရှုံးတာ ဘာဆန်းလဲဗျာ...ရှုံးနိမ့်ခြင်းကို ရိုးသားစွာ ခံယူနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း တောင်မရှိပဲ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကို ဦးဆောင်လို့ ရနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ မထင်ပါဘူး...
နိဂုံးအနေနဲ့ ခြုံပြီးတင်ပြရရင် အထက်ပါသုံးသပ် ဆန်းစစ်ချက်များ အရ အခုပြည်သူ့လွှတ်တော်အသီးသီးမှာ တက်ရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးဟာ လွတ်လပ်တရားမျှတ တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေရွေးပေးလိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ် ဒီလို ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ခုဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ့် အစိုးရကို မထောက်ခံဘူး လက်မခံဘူး ဆိုရင် ဘယ်အစိုးရကိုများ ထောက်ခံ ချင် လက်ခံချင် နေကြတာလဲလို့သာ မေးလိုက်ချင်တော့တယ်ဗျာ.......
အပိုင်း (၁) ပြန်ဖတ်ရှုလိုပါလျင် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ